Miaraka amin'ny vato amin'ny sobika - mamita ny trano amin'ny vato kanto sy voajanahary
Manoloana vato ho kitay - endri-pifanarahana vato, vita
Ny fisafidianana fitaovana ho an'ny fambolena any ivelany dia asa sarotra foana - ilaina ny miaro ny rafitra amin'ny fiovan'ny hafanana sy ny fahamendrehana ary tsy manimba ny aesthetics. Ny fiandrasana vato ho an'ny socle dia tsy vitan'ny hoe miara-miasa amin'ny fiarovana fotsiny, fa manome ny fanorenana fanajana.
Famaranana ny sobika amin'ny vato voajanahary
Araka ny fantatrao, ny sôkely dia ampahany amin'ny fototra miorina eo ambonin'ny tany. Ity ampahany ity dia ny entana avo indrindra: ny lanjan'ny rindrina sy ny tafo, ny karazan-javamaniry, ny fiantraikan'ny tara-masoandro, ny vokatra mampidi-doza amin'ny simika sy ny fungi. Ny fitaovana mifanentana mifantoka dia mamela ny fanamaivanana haingana ny haingam-pandeha manimba, fa koa ny fananganana ny rafitra lavitra, satria ny fotony dia tetezana mangatsiaka avy amin'ny fototra mankany amin'ny faritra velona.
Ny vato natiora natokana ho an'ny fototra ny trano dia azo antsoina hoe karazan-trano mamirapiratra indrindra - ny tranobe iray miaraka amin'ny fanampiany dia mahazo fijery sarobidy sy manaja. Manintona koa ny fiaraha-miasan'ny tanjaka sy fiarovana avo lenta amin'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana. Saingy tsy dia nisy ny tsy fahampiana. Anisan'izany ny vidin'ny fitaovana, ny filana ny fanamafisana ny fiakarana eo aloha, ny fahasarotan'ny fandidiana ary ny fitomboan'ny entana eo amin'ny fototry ny trano, izay manome vato mitodika amin'ny socle noho ny lanjany manokana.
Vato voajanahary miatrika ny sobika
Ny famaritana ny socle amin'ny vato dia manomboka amin'ny fisafidianana ny karazana fitaovana. Miankina be dia be amin'ny fahafahana ara-bola sy ny famolavolana hevitra, saingy misy fitsipika tsy hovana:
Tokony hapetraka eo amin'ny toerana iray izay hanorenana ilay trano ny vato tandrify. Izany dia hanampy amin'ny fisorohana ny tsy ampoizina tsy nampoizina rehefa vita ny famaranana, ohatra, ny fahafatesan'ny toerana noho ny rivotra mangatsiaka na mahery.
Aza mifangaro amin'ny vatofantsika silikola sy karakato. Ireo zavatra izay mamolavola ny fotony dia tsy "sariaka" amin'ny tsirairay, ka ny vokatra dia hikoriana haingana.
Ho an'ny fiatrehana ny asa dia azo ampiasaina ireto karazana vato ireto:
Vato marmora fotsy. Na inona na inona vidiny sy toetry ny fitaovana avo lenta, ity vato ity dia tsy ny hevitra tsara indrindra amin'ny fametrahana ny socle. Eo amin'ny sehatry ny famantaranandro marbra, dia hivoatra mandritra ny fotoana maromaro ny soritry ny rano, ny fotaka, sns. Ary eo ambany fiantraikan'ny ririnina amin'ny ririnina, dia mety hanjavona ny sakana ary hanomboka hikorontana.
Granita. Noho ny tanjany, io vatolampy io dia nantsoina hoe vato mandrakizay. Ho fanamafisana ny hevitra ny fampiasana ny granita ho toy ny vato fijery ho an'ny socle dia milaza ny fanoherany ny vokatra faran'izay simika sy mekanika, loko isan-karazany ary ny mety hisian'ny fitsaboana isan-karazany.
Vatovary. Porosy sy hazavana, ny vato dia tsy mijery fotsiny ny fotony, fa miasa toy ny tsindrim-bary fanampiny. Mba hanamafisana kokoa ny rano sy ny rivotra, dia manampy ny varimbazaha sy / na manadio.
Shell rock. Noforonina tamin'ny natiora avy amin'ny sisa tavela tamin'ny vatomamy, ny rock shell dia singa miavaka iray - tsy manala ny socle fotsiny izy, fa manatsara ny atmosfera ao an-trano, miasa toy ny bakteria mpiaro.
Bato. Ny vatolampy mahery vaika avy amin'ny volkano dia nantsoina hoe loko voajanahary. Mazava ho azy fa tsy miraharaha ny fahasimban'ny mekanika izy, ny taratra ultraviolet sy ny fiovan'ny hafanana.
Miaraka amin'ny vato matevina
Ny vato voajanahary ho an'ny fametrahana ny sobika, izay nahazoana ny sombin-tsisim-bato dia lasa sombina amin'ny endrika tsy misy fotony, fa ny hatevim-be kosa dia nantsoina hoe ala . Ny famaranana ny tontolon'io fitaovana io dia nanjary asa mahaliana, saingy sarotra - ilaina ny manangona lamba iray manontolo amin'ny tsipika samihafa samihafa. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny teny hoe "wild" dia ampiharina amin'ny sainam-bato marevaka misy lala-manga.
Socket vita amin'ny korontan-trano
Rocky na vatolampy - vato vatosanga, manana haben'ny 50 cm eo ho eo amin'ny fiaramanidina rehetra. Ny vidin'ny fitaovana toy izany dia mety hitovitovy amin'ny toerana sy ny fomba fitrandrahana (manual or machine). Ny fikarakarana ny socle amin'ny vato voajanahary toy ity dia mila mampiasa masom-boly tsara ary mampiasa fako mahery.
Fivalanana ny sôkely amin'ny vato niravaka
Antsoina hoe ragged ny iray amin'ireo karazam-bato, izay ahitana ny saron-tava ivelany tsy manam-ponenana. Hahazo izany amin'ny fanampian'ny jirambe na mandefa fipoahana. Ny fametrahana ilay socle amin'ny vato miloko miaraka amin'ny tarehy rovitra dia manome ny tranon'ireo karazam-piraisana manokana - ny trano tokana tsotra miaraka amin'ny fanampian'ireny fivalozana ireny dia mitovy amin'ny trano iray taloha.
Mamelatra ilay socle amin'ny vato kanto
Na dia eo aza ny fiangaviana voajanahary voajanahary, dia tsy ho very ny lazany intsony ny fikojakoan'ny socle miaraka amin'ny vato . Ny anton'izany dia maro ireo ary ny iray amin'ny vidin'ny lafo vidy toy izany. Ny teknolojian'ny famokarana maoderina dia ahafahana mahazo ny vatan'ny artifisialy ho an'ny socle, mitovy amin'ny natsangan'ny natiora ety ivelany ary somary ambony kokoa noho ny tarehimarika. Ohatra, ny vatan'ny artifisialy dia afaka manakana mihoatra ny fe-potoana maherin'ny 150 amin'ny fahaketrahana mangatsiaka.
Toe-batana ho an'ny socle
Ataovy haingana ny lakandranon'ny ampahany amin'ny fanorenana faritra iray ary ny rafitra dia hanampy amin'ny famitana ilay socle amin'ny vato henjana. Ny fitaovana maoderina mifototra amin'ny haran-kolta sy ny felana voajanahary dia tsy azo lavina amin'ny vato voajanahary, fa ny plastika, ny hazavana ary tsy mitaky fahaizana manokana ho an'ny fametrahana. Ny vato matevina dia omena ny socle amin'ny rolls na tapaka amin'ny habe kely. Ny fametrahana azy dia mitovitovy amin'ny fanangonana tapakila mahazatra. Mba hanafenana ny tebiteby eo amin'ny seha-pamokarana tsirairay dia miitatra amin'ny fanadiovana ny volon'izy ireo.
Clinker mozika eo ambanin'ny vato ho an'ny sobika
Ny mpankafy ny endrika henjana sy loko mihidy dia ho toy ny kilaometatra miolikolika manoloana ny vato. Ny fametrahana vato toy izany ho an'ny socle dia tsy sarotra kokoa noho ny miasa amin'ny plastika tsotra, ary ny vokatra dia hampifaly ny maso amin'ny fahamarinan'ny tsipika. Ny vatan'ny kilaometatra dia manindrona karazana vato, fa ny mahazatra indrindra dia ny vatosoa.
Porcelain ho an'ny kapa vato eo ambanin'ny vato
Azo antoka fa ny fiarovana ny fototry ny trano amin'ny hatsiaka, ny fahamendrehana ary ny tara-masoandro dia afaka manamboatra ny tranon'ilay trano miaraka amin'ny vato onenana mifototra amin'ny vato vita amin'ny pentikaly . Mba hamokarana ity fitaovana ity, dia ny fitaovana voajanahary ampiasaina ihany no ampiasaina: vy, tanimanga, rindrina ary nikela. Ny haben'ny granite keramika dia maingoka na matromatika, manana tora-boka na maloto. Izy io dia novolavolaina tamin'ny endriky ny takelaka kareza misy lafiny 300 ka hatramin'ny 600 mm ary ny hateviny dia afaka miovaova amin'ny 1.6 hatramin'ny 12 mm. Noho izany dia azo atao ny mifidy vatosoa vita amin'ny granita vita amin'ny seramika mba hamaranana ny faritra misy ny faritra.
Famaranana ny socle miaraka amin'ny tonta mandrakotra ny vato
Ny fomba fividianana ankapobeny indrindra hiarovana ny fotony dia ilay tapa-pandrefesana eo ambanin'ny vato. Ho an'ny fikojakoana fampiasana metaly vita amin'ny metaly matevina trapezoidal miaraka amin'ny lakaoly vinyl, izay tena simulates ny zana-kazo. Tsy sarotra ny fametrahana ny endriny toy izao: eo am-baravarankelin'ny socle guide guides installé, izay misy ny ampahany ao amin'ny profiela mifatotra. Ny fahasarotana lehibe indrindra dia ny tsy manimba ny loko volon-koditra vita amin'ny lamba famonosana rehefa manapaka.
Lamina ho an'ny fitaratra
Ny jiro manala jamba - ahoana no fomba fidinao any anatiny?
Toerana manga ho an'ny efitra fandroana
Mosaika ho an'ny dobo
Fijerena ny lokon'ny rindrina
Fametrahana plastika ao amin'ny efitra fandroana
Fotoana ankehitriny ao amin'ny aterineto
Gaga be! Tany Papouasie-Nouvelle-Guinée, nisy vatana mangotraka
Sakafo tabilao 5 - sakafo isan'andro
Makronisos Beach Beach
Kaviara kôkà misy mayonnaise sy tomato paste
Dresses tsara ho an'ny fizarana 2016
Nahoana ny olona iray no miresaka amin'ny nofy?
Ahoana no hambolena hydrangea amin'ny fahalavoana?
Mpanjifa mpanampy amin'ny tananao
Galitose - fitsaboana any an-trano
Baby bed "Delphine"
Sofa misy fiarovan-tratra
Ahoana no ahazoana ajiku amin'ny voatabiha miaraka amin'ny tongolo lay?
Beige manao akanjo lava
Tombontsoa avy amin'ny lafarinin'ny afon-tsakafo